Abakhweli be365 bangamawaka aBantu abasuka eMarmaray, kwi15 Julayi Martyrs Bridge Baxhamla kwi-156 Iinqwelo eziliwaka ngoSuku | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulI-Marmaray 365 Amawaka abakhweli ngemini, I-15 Julayi Martyrs Bridge 156 Iinqwelo zeMoto eziSibonelelo zoMhla
08 / 11 / 2019 34 Istanbul, railway, JIKELELE, hyperlink, Highway, KENTİÇİ Rail Systems, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, Metro, ETURKEY
marmaraydan amawaka abakhweli ngemini julayi ukholo koprusunden amawaka iimoto mihla
Abakhweli be365 bangamawaka aBantu abasuka eMarmaray, 15 amawaka eenqwelo-mafutha Usuku olusuka kwi-Martyrs 'Bridge UMphathiswa uTurhan uthathe inxaxheba kuthotho lokuqala lweenkomfa ze "City kunye neeNtetho zoMthetho" ezilungiselelwe nguFatih Sultan Mehmet Vakıf iYunivesithi yeZomthetho kwiHolo yeNkomfa ye-Haliç.
Kwinkcazo-ntetho yakhe enesihloko esithi İstanbul Istanbul ngokwemiGaqo yeThutho yoThutho, iTurhan yathi iimfuno zabantu zothutho zisekwe kwakudala kakhulu.
Kwiminyaka yakutshanje, ngakumbi emva kwembali yaseRiphabhlikhi, ukukhula okukhawulezayo kwabahlali e-Istanbul, ukufudukela kwabantu edolophini ngokungekho mthethweni kunye nolwakhiwo oluvele eTurhan, nangona kunjalo, iinkonzo ezingacwangciswanga zeziseko zempilo zazisa neengxaki kubomi bemihla ngemihla, utshilo.
INüfus Inani labemi baseIstanbul lenyuke ngaphezulu kumgangatho we12 ”
UTurhan uthe enye yezona ngxaki zibalulekileyo zeli xesha lanamhlanje yingxaki yezothutho. "Ke ngoko, amazwe abaluleke kakhulu kule micimbi. Bazama ukoyisa ingxaki ngemigaqo-nkqubo yokuhamba. Imetropolises, kwelinye icala, iphambili kwindawo apho iingxaki zothutho zifikelela kumanqanaba obuhlungu. Kuba i-Istanbul 15 yenye yeedolophu eziphambili zehlabathi ezinabemi abangaphezu kwesigidi esinye, kudala iyenye yezinto eziphambili ze-ajenda yemigaqo-nkqubo yokuhamba.
UTurhan uxele ukuba eyona nto iphambili kwezothutho eIstanbul kukunyuka kwenani labemi besi sixeko kumgangatho we-70 nangona ukwanda komgangatho we3-4 kulonyaka u-12 udlulileyo. Ngapha koko, xa sisongeza kwisantya esonyukayo seqonga lezolimo nelisekwe e-Istanbul kwingingqi, imeko iya isiba mandundu. Ngapha koko, ngombono wombono, ukulungiswa kwezibonelelo ezifanelekileyo kwenziwa ngexesha kwaye imigaqo-nkqubo yokuhambisa ibhulorho ngekhe ibe namava namhlanje.
"15 Julayi Inani lezithuthi ezidlula kwi-Martyrs Bridge ngamini enye ye-156 amawaka"
UTurhan ukhumbuze ukuba ingxaki ye-Istanbul yezothutho yayingumxholo weendaba ezivela kwi-45 kwiminyaka eyadlulayo kwaye yaqhubeka ngolu hlobo lulandelayo:
"Abemi besi sixeko babeyi-4 yezigidi. Ngeli xesha, i-26 yayidlula iwaka lezithuthi ukusuka kwiBosphorus Bridge kwaye abahlali bakhalaza malunga nokuchitha ngaphezulu kweeyure ze-1 xa behamba besuka kwenye indawo besiya kwenye. Njengoko uyazi, ngelo xesha, sasinabantu abanobuchule nabanoxanduva ababenezimvo ezahlukeneyo malunga nokuba le bhulorho yayifanele yakhiwe okanye hayi. I-40-50 kwiminyaka eyadlulayo, ingxaki yezithuthi eIstanbul ibingumxholo weendaba ngendlela eye yakhala intsimbi. Nangona kunjalo, akukho manyathelo athatyathwayo malunga noku. Namhlanje abemi besixeko basondele kwi-16 yezigidi. Inani lezithuthi ezibhalisiweyo lijikeleze i-4 yezigidi ze-200 amawaka kwaye oku akukafikeleli kwinqanaba lokugcwala. I-15, ebizwa namhlanje, linani leemoto ezidlula kwi-Martyrs 'Bridge ngemini. Ngexesha lokuvula, ngeenxa zonke iinqwelo ze156 zamawaka zazidlula namhlanje. Ukuba ucela ubungakanani bokubekwa kweyona bhulorho, xa uyilinganisa ngokwenkonzo, kuyakufuneka udlule kwizithuthi ezili-26 eziliwaka ukuba udlula kwiibhulorho zenkonzo kuhambo lokuhlangana rhoqo. Ubungakanani bokuxinana kobunzima kwitrafikhi ye-156 amawaka. Kodwa ngoku, i-90 yenkulungwane yeemoto zidlula kule bhulorho ngosuku. "
Mümkün Njengoko besenzile kutshanje, kunokwenzeka ukuba sithintele ingxaki zendlela kwaye sinciphise ifuthe lazo ”
Ukuphawula ukuba le meko ichaphazela kakubi ukuthuthwa, uTurhan uthe:
Unuz Uyabona izibonelelo zoncedo ezidlulile kwezinye iibhlorho kwaye zicwangcisiwe kwaye zabekwa ndawonye ngabalawuli bengingqi kwixesha elidlulileyo ukulungisa ingxaki yokuhamba e-Istanbul kule minyaka idlulileyo. Simise ibhulorho kaFatih Sultan Mehmet, I-Eurasia Tunnel kunye neYavuz Sultan Selim Bridge njengeenkonzo. ”
Egxininisa ukubaluleka kweeprojekthi ze-mega ezisandula ukwenziwa e-Istanbul, Umphathiswa uTurhan uthe, i-Iin namhlanje, akunakwenzeka ukusombulula ingxaki ngokupheleleyo kodwa kunokwenzeka ukuthintela ukwanda kwengxaki ngaphandle kwaye kunciphe ukusebenza kwayo. Oku kubandakanya ubusoshiyali, uqoqosho, itekhnoloji, izibonelelo zenkcubeko kunye neemeko zomthetho. Ke ngoko, sijamelana neengxaki ezinzima nezinobunzima obuninzi. Xa sithetha ngemigaqo-nkqubo yokuhamba ye-Istanbul, kufuneka siqwalasele yonke le micimbi. Ngokukodwa umboniso, iindlela ze-populist kufuneka zithintelwe. Ezi ndlela zichasene nobume nomoya weenkqubo zothutho. Uyakwenza ishishini, uza kwenza iprojekthi, uza kulawula iprojekthi, uza kubonelela ngenkonzo. ”
UTurhan uthe izinga lobunini bezithuthi liza likhula ngokuhamba kwexesha kwaye kuya kubakho izithuthi ezininzi kunye neendlela ezindleleni .Ngoko ke, iinkqubo ezintsha zezothutho ziyafuneka eIstanbul kwaye kufuneka zicwangciswe ngakumbi kuqwalaselwa ubume beso sixeko kunye nokuma kwazo.
"Umndilili wabantu abahamba i-365 amawaka abantu baxhamla mihla le eMarmaray"
UMphathiswa uTurhan wathi iiprojekthi ezibalulekileyo ziyaqhubeka e-Istanbul kwaye waqukumbela amazwi akhe ngolu hlobo lulandelayo:
Uz U sebenza nzima kwaye ngenkuthalo uthwala isiseko sezothutho se-Istanbul kwindawo efanelekileyo ubuqaqawuli bayo, ubungakanani bayo kunye nobukho beeprojekthi ezigqityiweyo, eziqhubekayo nezijolise kuzo. IMarmaray, neyabekwa kwinkonzo kwisikhumbuzo se-90 sokusekwa kweRiphabhlikhi yethu, yenye yezona zinto zazibaluleke kakhulu kwezi. Ngelixa inkqubo yezothutho yaseMarmaray, i5,5, esebenza kule nkqubo, isebenza nesikhululo se5 unyaka wonke, i43 iqale ukusebenza ngokuma namhlanje kwaye i-365 amawaka abakhweli ayaxhamla kule nkonzo ngosuku. "
I-15 kaJohn Martyrs Ibhuloho iya kuhlaziywa
I-15 kaJulayi Martyrs Bridge Bridge kwi-O1 Roadway…
I-FSM kunye ne-15 kaJulayi abafikayo kwiNkonzo yeZothutho…
I-15 Julayi Iingqungquthela zamaToll zihamba kwi-Bridgey Martyrs Bridge
I-15 kaJulayi Martyrs I-Bridge phakathi kobusuku bu
Karşıyaka I-30 ithwala abakhweli abangamawaka ngosuku
I-Samsonunda Trams Ithatha i-65 Abagibeli abayiNkulungwane ngeSuku
Umgca webhasi ye365 eKocaeli ulandelwa ukusuka apha
Ukusuka kwi-Osmangazi Bridge, i-3 yeyona
I-GAZİRAY 100 Abagibeli beeNkulungwane baya kuhanjiswa
I-20 abayi-720 abagibeli bahamba ngemini e-Akçaray
I-Metroverlessless Metro 4 292 Thousand Abagibeli be-344 badlula Ngosuku
I-500 Iingqwelo Zamawaka ngeSuku
Ordu Cable Car 9 100 ithathe abagibeli abayizinkulungwane ngosuku
Linesküdar-Çekmeköy iMetro yomhla wokuqala wosuku 179 amawaka e-612 İlk
IFatih Sultan Mehmet Bridge
Enye indlela eya kwiibhasi zaseKadikoy